Xaliimo Yarey oo 'middi middi ku tag' ku tilmaantay xaaladda Dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Xaliimo Yarey oo ‘middi middi ku tag’ ku tilmaantay xaaladda Dalka
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Yarey ayaa middi middi ku tag ku tilmaantay dastuurada faraha badan ee dalka ka jira ee maamul waliba uu mid gooni ah ku dhaqmayo.
Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim 'Xaliimo Yarey' oo ka qeyb gashay Shirka Sanadlaha ah ee garsoorka Dalka oo maanta Magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadashay xaalado kala duwan oo dalka ka jira.
Xaliimo Yarey ayaa sheegaty in waxa ugu dhibka badan ee maanta dalku wajahao ay tahay hareer marka iyo dhowris la’aanta dastuurka ku meel gaarka ah, waxa ay taas u aaneysay in ay jirin hay’addi garsoorka ee Dastuurka ilaalin lahayd.
“Waa la dagaalay waa la isku yimid Dastuur ayaa la dhigtay, ma dhameys tirna, mana saxsana hadana waa in aan sidaa aan u dhiganay ku xushmeyno, haddaan dastuurka la qadarineyn, maadaama aan ku heshiinay hore uma soco-neyno, ha’addi noo ilaalin lahaydna haddi aysan jirin meeshaan waxa aan u fadhinno oo aan isku sheegeyno waa jaantaa rogan”. Ayay tiri Xaliimo Ismaaciil.
Waxay middi middi ku tag ku tilmaantay dastuurada faraha badan ee dalka ka jira ee maamul waliba uu mid gooni ah ku dhaqmayo, ayadoo arimahaan ka hadleysa ayay tiri, “Dastuurkan heykalki kala hagi lahaa oo haddi wax yimaadaan kala qaban lahaa hadaan la helin Soomaaliya meel uma socoto”. Dowlad goboleedyadu Dastuurkooda ayay heystaan kooda ayay ku dhaqmaan waa ku saxsan yihiin, dastuur qaran aya jira in lagu dhamo waaye waa sax laakiin ma is leeyhiin labada dastuur? qoloba meel ayay u socotaa”.
Sidoo kale waxa ay madaxda cadaaladda ka codsatay in guddiga dadban ay tababarro siiyaan si aysan arinti 2016 oo kale u dhicin, ugu danbeyn waxa ay hadalkeeda kusoo gabagabeysay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed dhistaan dowlad madax bannaan oo aan xerada Xalane laga xukumin.
Magaalada Muqdisho waxaa Maanta ka furmay Shir aad loo maamuusay oo looga hadlayo arrimaha Garsoorka iyo caddaaladda, iyadoo aad loogu dhibban yahay Garsoorka iyo Caddaaladda dalka.
Sida ay Keydmedia Online hore usoo qortay, dalka ayaa guud ahaan la daalaa dhacaya musuq-maasuqa, awwood ku tumasho xad-gudub ka dhan ah shacbaka, hay’adaha dowladda oo garsoorku ugu horreeyo ayaana ah halka ugu sarreysa ee wax is daba marintu ka dhcdo.
Warar 19 January 2021 12:50